विवाहबारे यस्तो योजना बनाएकी छिन् कटरिनाले
बलिउड । पछिल्लो समय खासै चर्चामा नरहेकी अभिनेत्री हुन् कटरिना कैफ । कुनै समय सलमान खानलाई धोका दिदै रनवीरसँग अफेयरमा रहेकी अभिनेत्री यतिखेर सिंगल रहेको बताउँदै आइरहेकी छिन् ।
बहुविवाह गर्ने एक जोडी प्रहरी फन्दामा
अछाम । अछाम जिल्लामा बहुविवाह गर्ने एक जोडी प्रहरीको फन्दामा परेका छन् ।
काठमाडौँ । नेपालको संविधान र कानूनले वैवाहिक समानतालाई स्वीकार गरेको भन्दै यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानून बनाउन माग गरेका छन् ।
बाल विवाह गर्ने पक्राउ
बेत्रावती । बालिका विवाह गरेको अभियोगमा नुवाकोट प्रहरीले प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका–२ का पवन घर्तीलाई शुक्रबार पक्राउ गरेको छ ।
विवाहका लागि युवती नपाएको पिडा !
एजेन्सी । विवाहका लागि युवती नपाएपछि तनावमा रहेका एक ३१ वर्षिय चिनियाँ युवकले आफैले बनाएको रोबोटसँग विवाह गरेका छन् । जीवन बिताउने मानव बेहुली नपाएपछि उनले रोबटसँग विवाह गरेका हुन् ।
विवाह पुर्व युवतीहरुलाई यस्ता कुराले सताउने गर्छ
एजेन्सी–विवाहपश्चात शारिरीक सम्बन्ध जिन्दगीको एक प्रमुख तत्वको रुपमा लिइन्छ । केही युवतीहरु यसबारे गम्भिर हुने तथा विवाह अगाडि सम्बन्धको बारेमा धेरै सोचहरु पालिराखेका हुन्छन् ।
यस्ता अभिनेत्रीहरु जसले अर्को धर्म मान्ने व्यक्तिहरुसँग विवाह गरे
बलिउड–बलिउडको फेशन र लाइफस्टाइलको धेरै मानिसहरु फ्यान रहेका छन् । ती सेलिब्रिटीहरुको पनि आफ्नै व्यक्तिगत जीवन हुन्छ । बलिउडका केही यस्ता अभिनेत्रीहरु रहेका छन्
राशीअनुसार कोसँग बिहे गर्ने र कोसँग नगर्ने ?
एजेन्सी । विवाह साँच्चै नै एउटा ठूलो फैसला हो । यत्तिकै जो कोहीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिनु र पुरै जिन्दगी उसैसँग बिताउनु, यो कुनै सानो कुरा होइन । मानिसहरुले आजको समयमा विवाहलाई आधुनिक तरिकाले लिन्छन्, विवाहभन्दा पहिले केटा(केटीको थुप्रैपटक मिटिङ्ग गराउँछन् तर बिहे नभएसम्म कसैको असली स्वभाव थाहा पाउन सकिँदैन ।